Ngwunye ikuku kacha mma ikuku na-emepụta na ụlọ nrụpụta | Okwu
dobe na gearboxes
pole ọkwọ ụgbọala
gearboxes nke ulo oru
njikọ ụgbọala spindle
Kpọọ Nkwado 86-574-87795966
Email Nkwado ire@nbintech.com
&Gwè & Irongwè
Akwụkwọ, anụ ahụ & Fiber
Ọrụ Mmiri & Port
Mmepụta anụ ahụ
Nweta nkwalite & Re-engineering
Single & Tandem draịva
ifufe ike eluigwe na ala njikọta
pole mbanye isi
Hydraulic njem njem
Ngwaahịa Ngwaahịa Nlele 101 ~ 130 Allowable rotational ọsọ (r / min) 500 ~ 4000 Node toyque (Nm) 630 ~ 280000 Nkọwapụta Ngwaahịa Ike ike ụwa niile njikọta Ikuku ike njikọ ụwa niile nwere uru nke kọmpat, obere oge nke inertia, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya. ikike na obere ọrụ ịkwụ ụgwọ. Tụnyere ndị ọzọ ụdị njikọ, ọ nwere kacha torque nnyefe na otu size. Ọtụtụ-eji na nkà mmụta banyere ígwè, Ngwuputa, bu ...
Allowable rotational ọsọ (r / min)
Egwuregwu toy (Nm)
Ifufe ike eluigwe na ala njikọ
Ifufe ike eluigwe na ala njikọ nwere uru nke kọmpat, obere oge nke inertia, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, na-ebu ikike na obere ọrụ ịkwụ ụgwọ. Tụnyere ndị ọzọ ụdị njikọ, ọ nwere kacha torque nnyefe na otu size. A na-ejikarị ya arụ ọrụ, ígwè, ihe owuwu ụlọ, kemịkalụ, mmanụ ala, ụgbọ njem, akwa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Gear njikọ, na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi okpomọkụ -20 ka +80, nomine toque nyefe maka 0.4 ka 4500kNm, ekwe ọsọ maka 4000 ka 460r / min, aro dayameta nso nke 16 ka 1000mm.
Ikuku ike ule ojii eluigwe na ala njikọ
Ike ikuku na-anwale njikọta zuru ụwa ọnụ na-akpọkwa kaadị njikọ, isi ihe bụ na ọ nwere ike ijikọ akụ abụọ dị na ọ bụghị coaxial, ma nwee ike ịchụpụ ya na ntụkwasị obi dị elu na ntụgharị na ntụgharị ntụgharị. Ọ nwere uru nke kọmpat, obere oge nke enweghị ike, enweghị mkpọtụ, arụmọrụ siri ike, ogologo ndụ, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ibu ikike na nnukwu ego nke ụgwọ nke akụkụ. Tụnyere ndị ọzọ ụdị njikọ, ọ nwere kacha torque nnyefe na otu size. A na-ejikarị ya na ígwè ọrụ, ime ígwè, kreenu na igwe eji ebu ya, igwuputa ihe, ihe owuwu ụlọ, kemịkalụ, mmanụ ala, mbupu, igwe agba, ike ikuku, akwa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ifufe ike ule eluigwe na ala njikọ nwere SWC (dum ndụdụ), SWP (gbawara n'etiti agba nkwado), SWZ (dum agba support) ụdị dabere na amị ofu ụdị.
Dabere na njedebe efere edozi ụdị, enwere isi njedebe, isi ezé, ezé ezé, njikọ ngwa ngwa na wdg, usoro njikọta maka ịkwọ ụgbọala ma ọ bụ ịkwọ ụgbọ elu nwere cylinder na igodo, cylinder na-enweghị isi, ọ bụghị okirikiri oghere na wdg. flange n'obosara nwere ike ibu karịa rotatory dayameta.
Gear njikọ, na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi okpomọkụ -20 ka +80, nomine toque nyefe maka 0.4 ka 45000kNm, ekwe ọsọ maka 4000 ka 460r / min, aro dayameta nso nke 16 ka 2000mm.
Nke gara aga: Gburugburu bevel gia akụkụ
Osote: Ngwaọrụ varibloc
Site na imeputa ihe ohuru iji mepee ngwa ahia ndi ozo karie iji gboo mkpa nke oganihu di n'ihu, na inye ndi ahia ngwa ngwa ngwa ahia di ala bu ihe anyi choro.
Gear enineering ọrụ bara uru
Nlekọta maka ụlọ ọrụ Gearmotors na su ...
Kedu ihe jikọrọ njikọta ụwa niile
Ọrụ nke gearbox